Maqaalka uu kuu sheegayaa hal dukaan kale oo Transfer File Android ah, taas oo kuu ogolaanayaa inaad u hagaagsan maktabadda Lugood leh phone Android oo kiniin ah, oo lagu wareejiyo Mac si fudud Android. Read More >>
Haddii aad raadineyso weeyna ah qalab kala iibsiga file Android, waa in aad eegno 5 file software kala iibsiga ugu sareysa qalabka Android. Read More >>
Maqaalkani waxa uu muujinayaa inaad top 4 software inay sameeyaan Transfer file USB Android ku haboon. Read More >>
Maqaalkani waxa uu idin ​​tusiyo 4 hababka loo sameeyo Android kala iibsiga file WiFi fudayd. Read More >>
Ma doonaysaa in ay barnaamijyadooda ku wareejin ka Android oo badbaadiyo, waa in aad telefoon cusub Android? Halkan waxaanu kuu soo bandhigi qaab fudud oo fudud in la sameeyo hawsha. Read More >>
Halkan waa qaab fudud oo ay u gudbiyaan xiriirada ka Nokia in Moto X. Read this article oo ay leeyihiin isku day ah. Read More >>
Article wuxuu bilaabay qalab kala iibsiga phone si sahlan loo isticmaalo ah, taas oo ka caawisaa si ay u gudbiyaan xiriirada ka phone Nokia Symbian in phone HTC 1 click. Read More >>
Ma doonaysaa in lagu wareejiyo SMS, music, sawiro, video iyo xiriirada ka Nokia in Sony? Wondershare MobileTrans Kuu ogolaanaysaa inaad xaqiijiso hadafka kaliya 1 click. Read More >>
Maqaalka uu kuu sheegayaa sida loo xogta ka Nokia wareejiyo Samsung Read More >>
Isticmaalka Wondershare MobileTrans, waa habka ugu fudud ee aad u hesho files ka Nokia in aad Motorola rikoor waqti. Read More >>
MobileTrans Waa xal aad u fiican uga Nokia wareejinta xiriirada qalabka LG. Read More >>
Waxaan soo kaban karaa files tirtiray on my Samsung Galaxy? Sure! Waxaad dib u soo ceshano karo xiriirada lumay, SMS, sawiro iyo video ka Samsung Galaxy la eber tayada khasaaro. Read More >>
Sidee ayaan u soo ceshano SMS tirtiray ka phone Samsung? Waxa kaliya ee aad qaadataa 3 tallaabo. Akhri hagahan si buuxda halkan iyo hadda dib farriimo aad telefoonka Samsung! Read More >>
Waa maxay sababta la tirtiro xogta looxa Samsung waxaa lagu soo saari karaa? Tilmaan-bixiyahan waxa kuu sheegayaa sababta iyo sida aad u soo kaban karto, xiriirada, SMS, sawiro iyo video ka kiniin Samsung. Read More >>
Waxaa la go'aamiyey in lagu wareejiyo xiriirada ka Android inay Samsung? Waa wax iska fudud oo si sahlan. Maqaalkani waxa uu ku tusaysaa sida ay u gudbiyaan xiriirada ka Android inay Samsung. Read More >>
Inkastoo app default mp3 ma shaqo fiican ugu ciyaaray kuwan raadkaygay mp3, waxaa jira dad badan oo ka soo Chine ee suuqa ka samatabbixin tayo leh iyo sidoo kale taageerada kordhin qaabab kala duwan in m default Read More >>
Maqaalka kuu sheegayaa sida ay u gudbiyaan xiriirada ka Android inay Android, xiriirada dhoofinta ka Android inay xiriir computer iyo CSV dejinta si fudud Android. Read More >>
Doonayaa inaan download ringtones lacag la'aan ah telefoonka aad Android sida Samsung? Articles waxa uu kuu sheegayaa 4 siyaabo. Read More >>
Posted by Ellon Smith | 02.12.2015
Maqaalkani waxa uu idin ​​tusiyo 2 siyaabaha ay u sameeyaan gurmad Huawei iyo soo celinta. Akhri oo dooran habka ugu wanaagsan ee. Read More >>
Maqaalka wuxuu ku saabsan yahay BlackBerry VS Android, wareejinta xiriirada, abuse call oo SMS ka BlackBerry in Android oo isticmaalaya barnaamijyadooda BlackBerry telefoonka Android. Read More >>
Posted by Thomas Jones | 01.12.2015